Sir Alex Ferguson oo soo bandhigay Qaladka uu sameeyay Solskjaer kulankii Everton | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Sir Alex Ferguson oo soo bandhigay Qaladka uu sameeyay Solskjaer kulankii Everton
Sir Alex Ferguson oo soo bandhigay Qaladka uu sameeyay Solskjaer kulankii Everton
Sir Alex Ferguson ayaa tooshka ku iftiimiyey qaladkii uu sameeyey ardaygiisii Ole Gunnar Solskjaer kulankii Manchester United iyo Everton ee Sabtidii, kaas oo kusoo dhamaaday barbarro 1-1 ah.
Manchester United oo lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan laba mar oo kaliya guuleysatay ayaa u hammuun qabtay inay saddexda dhibcood ku qaadato Old Trafford markii ay Everton ugu timid, laakiin gool ay la hormareen oo uu Anthony Martial u dhaliyey ayuu barbarreeyey Andros Townsend.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa canaan badan loo jeediyey ciyaartaas, waxaana dhibaatada ugu badan ku noqotay go’aankii uu ku fadhiiyey Cristiano Ronaldo oo qaybtii hore kursiga kaydka fadhiyey laakiin soo galay 12 daqiiqadood markii ay socotay qaybta labaad.
Sir Alex Ferguson oo muddo 27 sannadood ah oo uu tababare usoo ahaa Manchester United hawlgab noqday sannadkii 2013 isagoo usii qaaday horyaalka Premier League, ayaa waxa uu arkay qaladaadkii uu sameeyey Solskjaer ciyaartii Everton.
Ferguson ayaa si dadban ula hadlay Solskjaer, waxaanu u sheegay inay tahay inuu kusoo bilaabo ciyaartoydiisa ugu wanaagsan, taas oo uu ula jeedo in Cristiano Ronaldo oo uu kulankaas fadhiiyey aanu mar dambe kaydka gelin.
Garoonka Old Trafford ayay isku heleen feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov oo ay xoogaa ku sheekaysteen markii ay ciyaartu dhamaatay, waxaanay kaamirooyinka garoonku duubeen hadalladii ay is lahaayeen.
Ferguson ayaa ku yidhi Khabib:”Waxa aan u malaynayaa in Everton ay arkayeen in Ronaldo aanu ciyaarayn…”
Khabib ayaa ku jawaabay: “Haa, laakiin wuu soo galay qaybtii labaad.”
Ferguson ayaa mar kale yidhi: “Waan ogahay, laakiin waa in mar walba aad kusoo bilowdo ciyaaryahannadaada ugu wanaagsan.”
Previous articleSawirro: Rooble oo si weyn loogu soo dhoweeyay Doha + Ujeedka Qatar ugu yeertay
Next articleWararka Suuqa Caawa: Raheem Sterling oo Xiiso ka helaya Barcelona, Go’anka Kylian Mbappe iyo Qodobo kale
Photo/Reuters Madaxweynaha Lille Olivier Letang ayaa sheegay in Renato Sanches uu awoodi doono inuu ka tago kooxda reer France bisha Janaayo ama dhamaadka...